Led Display Poor အတွင်းပွင့်လင်းမြင်သာသော P3.91mm Led Mesh မျက်နှာပြင်ကိုကြော်ငြာခြင်းပြုလုပ်ရန် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
Transparent LED display series သည်ပြတင်းပေါက်များကြော်ငြာခြင်းနှင့်အဆောက်အ ဦး မျက်နှာစာများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, အရာမြင့်မားသော transparence ရှိပါတယ်, အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာများအတွက် HD resolution, ဒီစီးရီးကို ဦး ဆောင် display ကိုအလွန်ပေါ့ပါးသည်, တပ်ဆင်နေစဉ်နေရာလွတ်သေချာစေရန် panel အထူ ၆၀ မီလီမီတာသာရှိသည်
P3.91 ပွင့်လင်း led display ကိုမျက်နှာပြင်: ဆီမီးခွက်ပုတီးဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်, ထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက်ရန်လွယ်ကူသည်, မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ, ကြီးမားသောကြည့်ရှုထောင့်, မြင့်မားသော permeability, ဆောက်လုပ်ရေးအလင်းရောင်စီမံကိန်းသည် tilt welding ကိုရရှိနိုင်သည်;
ဖွဲ့စည်းပုံ: ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, တင်လိုက်တယ်, အလင်း, ပါးလွှာသော, ပွင့်လင်းမြင်သာသော, ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်, စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားအောင်မြင်ရန်လွယ်ကူသည်, အဆင့်မြင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်;
ဇာတ်လမ်းကိုသုံးပါ: ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်စျေးဝယ်စင်တာများတွင်အသုံးပြုသည်, စောင့်ဆိုင်းခန်း, ကားအဆောက်အ ဦး များ, ပြခန်း, ရုံးအဆောက်အ ဦး များဖန်ကာကုလားကာနံရံများ, etc.Project ကိစ္စ
၎င်းသည် louver များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော linear LED အသေးစားမီးလုံးများနှင့်တူသည်, အလွန်မျက်မှောက်၏လိုင်း၏အဆီးအတားကိုလျှော့ချရန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကို၏ဒီဇိုင်းအတွက်, ရှုထောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်စေ.
အနည်းဆုံး pixel pitch သည် ၃.၉၁mm ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုရောက်ရှိနိုင်သည် 68% ပွင့်လင်းမြင်သာမှု. Products with pixel pitch more than 10mm can reach 80%.
ဆီမီးခွက်အကြားရှိအကွာအဝေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပွင့်လင်းမြင်သာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးသည်။ မျက်နှာပြင်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သည်, လှပသောနှင့် fashionable.Cabinet အရွယ်အစား：1000 x500mm 500 × 1000
စနစ်ဆက်သွယ်မှုမှောင်မိုက်ဝါယာကြိုးဖွဲ့စည်းပုံချမှတ်သည်, လျှို့ဝှက်ဂီယာကြိုးတွေ, နောက်ဘက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည်
Transparent LED မျက်နှာပြင်
P3.91 Universal မိုးလုံလေလုံ&အပြင်ဘက်
Pixel Configuration SMD1921 SMD3535 SMD1921 SMD1921
သိပ်သည်းဆ (Pixels / ㎡) 32,768 8,192 32,768 32,768
module resolution ကို (Pixel) 64×32 32×16 128×16 128×8
module အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) 250×250 250×250 500×125 500×62.5
မောင်းနှင်မှုစနစ် (တာဝန်) 1/16 1/4 1/8 1/16
ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) 500×1000 500×1000 1000×500 1000×500
ကက်ဘိနက်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 7.5 7.568.5
တောက်ပ (စီဒီ / ㎡) ,5002,500 ,4,200 ,5004,500 ,82,800
ပွင့်လင်းမြင်သာမှု 70 70 70 70
Angle ကြည့်ရှုခြင်း (°) 120 120 120 120
မီးခိုးရောင်အဆင့် (-bits) 14 14 14 14
စစ်ဆင်ရေးပါဝါ AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz AC100-240V 50-60Hz
မက်စ်. စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (W / ㎡) 400 400 800 560
Avg. စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (W / ㎡) 135 135 220 185
ကြိမ်နှုန်း Frame (Hz) ≥60 ≥60 ≥60 ≥60
Frequency Refresh (Hz) ,83,840 ,83,840 ,83,840 ,83,840